राति रक्सी पिउने प्लानमा हुनुहुन्छ ? यो पढ्नुहोस् | suryakhabar.com
Home प्रदेश प्रदेश3राति रक्सी पिउने प्लानमा हुनुहुन्छ ? यो पढ्नुहोस्
राति रक्सी पिउने प्लानमा हुनुहुन्छ ? यो पढ्नुहोस्
on: ३० आश्विन २०७५, मंगलवार १२:५६ In: प्रदेश 3, समाचारTags: No Comments
यस्तै सर्पदंशको उपचार नपाएर मृत्यु भएका बालक सलिन विकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ ।
सो घटनाको छानबिन गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख विजय झाको संयोजकत्वमा छानबिन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पीडित परिवारलाई राहत दिन र दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । अस्पतालले सो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री आबे पाँच दिने भ्रमणका लागि युरोपतिर
विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा फूलपाती मित्र्याइयो, टीकाको दिनको यस्तो छ योजना
१२ मंसिर २०७६, बिहीबार १०:५०
३० आश्विन २०७५, मंगलवार १२:५६